Izindaba - Ngabe amabhere angenawo uwoyela awadingi Ngempela Uwoyela Wokugcoba?
Amabheringi angenawo uwoyela uhlobo olusha lwamabheringi agcotshisiwe, anezici zamabhere wensimbi namabhere angenawo uwoyela. Ifakwe i-matrix yensimbi futhi igcotshwe ngezinto ezikhethekile zokugcoba eziqinile.
Inezici zomthamo ophakeme wokuthwala, ukumelana nomthelela, ukumelana nokushisa okuphezulu kanye nekhono lokuzigcoba eliqinile. Ifaneleka ikakhulukazi ezimeni lapho kunzima khona ukuthambisa nokwenza ifilimu kawoyela, efana nomthwalo osindayo, isivinini esiphansi, ukuphindisela noma ukujikisa, futhi akesabi ukugqwala kwamanzi nokunye ukugqwala kwe-asidi.
Kabanzi metallurgical imishini thusi okuqhubekayo, imishini steel ugingqe, imayini imishini, imikhumbi, umusi turbines, ophephela wokubacindezela, umjovo udini imishini kanye nemishini ukukhiqizwa imigqa.
Ukuthwala okungenawo uwoyela kusho ukuthi ukuthwala kungasebenza ngokujwayelekile ngaphandle kukawoyela noma uwoyela omncane, kunokuba kungabikho oyili ngokuphelele.
Izinzuzo zamabhere angenawo uwoyela
Ukuze kuncishiswe ukungqubuzana kwangaphakathi nokugqokwa kwamabhere amaningi nokuvikela ukushisa nokunamathela, kufanele kufakwe uwoyela wokuthambisa ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okushelelayo nokwethembekile kwamabhere ukunweba impilo yokukhathala kwamabhere;
Ukuqeda ukungcoliswa kwemvelo okubangelwa ukuvuza;
Ifanele umthwalo osindayo, isivinini esiphansi, ukuphindisela noma ukuguqula izikhathi lapho kunzima khona ukuthambisa nokwenza ifilimu kawoyela;
Akusabi futhi ukugqwala kwamanzi nokunye ukugqwala kwe-asidi;
Ama-bearings abekiwe awagcini nje kuphela uphethiloli namandla, kepha futhi anempilo ende yokusebenza kunama-bearings ajwayelekile ashibilikayo.
Izinyathelo zokuqapha zokufaka ukuthwala okungenawo uwoyela
Ukufakwa kokuthwala okungenawo uwoyela kuyefana namanye amabheringi, eminye imininingwane kufanele iqashelwe:
(1) Nquma ukuthi ngabe kukhona ama-bulges, ama-protrusions, njll. Ebusweni bokukhwelana kweshaft negobolondo le-shaft.
(2) Noma ngabe kukhona uthuli noma isihlabathi ebusweni bendawo yokuhlala.
(3) Yize kukhona ukuklwebheka okuncane, ama-protrusions, njll., Kufanele asuswe nge-oilstone noma nge-sandpaper enhle.
(4) Ukugwema ukushayisana ngesikhathi kulayishwa, inani elincane lamafutha okugcoba lizofakwa ebusweni be-shaft negobolondo le-shaft.
(5) Ubulukhuni bokuthwala okungenawo uwoyela ngenxa yokushisa kakhulu ngeke kweqe ku-100 degrees.
(6) Isigcini sokugcina nokufaka uphawu lokungeniswa kukawoyela ngeke kuphoqwe.
Isikhathi Iposi: Aug-22-2020